Ahoana ny fomba hikirakirana fampisehoana Multi Easy? - Easy Multi Display
Rindrambaiko nomerika & rindrambaiko rindrambaiko horonantsary
Ny vahaolana mahomby indrindra amin'ny tsena!
Ivotoerana baiko sy mpamono afo
Pikantsary fandraisana nomerika
Toeram-pisakafoanana sy kafe
Sekoly sy fanabeazana
Travel & fizahan-tany
Cellarman & Cellera divay
Fivarotana spare fiara
Vondron-parmasia sy vondrona fivarotam-panafody
Agencies amin'ny trano sy tany
Hopitaly sy serivisy vonjy taitra
Podcasters sy bilaogera
Ahoana no azontsika anampiana?
Ahoana ny fanamafisana ny fampisehoana marika mora?
Noforonina On Desambra 12, 2019
2. Fametrahana ny fampisehoanao
Top Ny lohahevitra rehetra
Mora ny mampiasa EMD fa raha te hahafantatra ny fomba fanamboarana ny Easy Multi Display ianao dia vakio azafady ity lahatsoratra ity. Misy kisary telo izay manampy anao hamita ny asa samihafa ao amin'ny EMD.
Atombohy ny EMDisplay
Atsaharo ny EMDisplay
Ity no mpitsikilo fampisehoana izay mitarika anao amin'ny fametrahana ny fampisehoana.
Io dia ahafahanao manomboka ny fanitsiana farany tsianjery farany tsy am-panaovana ny famoizam-pivoarana.
Io dia ahafahanao miato ny fanamafisana farany tsianjery tsy am-panaovana ny famoizam-bolo.
Mampiasa ny sihirin'ny EMD mba hanamafisana ireo fampisehoana nataonao
Ampidiro ny fampisehoana maimaim-poana amin'ny findramana amin'ny alàlan'ny fikitihana indroa ny Fametrahana EMDisplay kisary ao amin'ny làlanao.
Safidio ny isa amin'ny fahitalavitra na mpanara-maso na fandaharana hafa ampiasainao, avy eo tsindrio Manaraka. Amin'ity ohatra ity, hanamboatra mpanara-maso roa aho.
Ankehitriny ianao dia hanapa-kevitra hoe inona no karazana fizarana tianao tianao aseho amin'ny fampisehoana 1, avy eo tsindrio Manaraka.
Amin'ity ohatra ity, nisafidy ny haneho faritra tokana aho, amin'ny fampisehoana 1.
Izao dia azonao atao ny mamaritra ny tianao manokana aseho amin'ny fampisehoana 1. Afaka misafidy URL ianao, na fampahalalam-baovao na isaky ny faritra tsirairay.
To asehoy tranonkala: Safidio fotsiny ny boaty etsy akaikin'ny URL ary ampidiro ny URL anao manokana.
To asehoy ny rakitra video na sary: Safidio fotsiny ny boaty fidirana eo akaikin'ny kisary Mijery, avy eo tsindrio ilay fampirimana hisafidy ny fampahalalam-baovao.
Amin'ity ohatra ity, dia nisafidy ny haneho horonantsary tokana mitondra ny lohateny amin'ny tsenan'ny sakafo aho.mp4
Azonao atao ny mamantatra mialoha ny safidinao amin'ny monitoranao ankehitriny na amin'ny Display 1 ka azonao antoka fa manana ny filaharana marina ianao. Rehefa faly amin'ny fanitsiana fampisehoana voalohany ianao, tsindrio Manaraka.
Izao dia afaka misafidy ny isan'ny zona ho anao ianao faharoa aseho, tsindrio Manaraka.
Amin'ity ohatra ity, dia hampiseho zara telo samihafa aho amin'ny fampisehoako faharoa.
Azonao atao izao ny mamaritra ny zavatra tianao aseho amin'ny Display 2. Azonao atao ny misafidy URL iray, na haino aman-jery isaky ny faritra. Raha vantany vao faly amin'ny fikirakira anao ianao, kitiho Manaraka.
Ity ohatra ity dia nisafidy ny haneho tranonkala iray ao amin'ny faritra 1 aho, lahatahiry horonan-tsary ao amin'ny Zone 2, ary handefa horonantsary avy ao amin'ny Vimeo ao amin'ny Zone 3. Afaka misafidy fanamafisana rehetra tianao ianao!
Rehefa avy nanamboatra ny fampisehoana rehetra ianao, dia manoro hevitra aho ny hanindry azy Ianaro tsianjery raha hamonjy ny fanamafisana anao amin'ny manaraka dia hanomboka Easy Easy Display.
Izao dia azonao atao ny manindry azy Hanomboka Aseho!
Mbola manana olana ve ianao?
Raha mbola manana fanontaniana na olana amin'ny fisehoanao na ny toerana misy anao ianao dia aza misalasala mitsidika ny anay FAQ, misintona ny user guide na mifandraisa amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa support@easy-multi-display.com. Faly izahay manampy anao ary faly izahay mandre ny hevitrao!
Ampidino ny rindrambaiko
Raha liana amin'ny rindrambaiko Easy Multi Display izahay dia kitiho Eto hampidina ny kinova fitsapana anay.
Lahatsoratra vitsivitsy izay tianay dia ho tianao!
Ny franchisee McDonald dia mampiroborobo ny firotsahana amin'ny signage nomerika
Ny signage nomerika dia mivoaka mandritry ny vaksinin'ny COVID
Ny fiantraikan'ny COVID-19 amin'ny tsenan'ny Cooler Digital Signage Cooler Market momba ny karazana sy ny fampiharana 2021-2026
Logo an'ny Easy Multi Display
Virtual Cockpit UK Limited avy amin'i Shares
EMD dia zarain'ny EEC avy amin'i TekAngel
All 198 Allée des écureuils, 34980 St Gély Sur Fesc
Torolàlana ho an'ny mpampiasa marika mora aseho V2
Ahoana no fomba hanehoako fanentanana?
Ahoana ny fampiasana ny fanaraha-maso lavitra antsika?
Ahoana ny fomba hanehoana hafatra an-tsoratra?
Ahoana ny fampiasana efijery 2 amin'ny WIN10?
Ahoana ny fomba hanehoana horonan-tsary maromaro?
Ahoana ny fomba hanehoana izany sary izany amin'ny fivarotana maro?
Ahoana ny fampisehoana ireo rakitra Powerpoint anao?
Inona no atao hoe seranana fampisehoana?
Ahoana no ahafahan'ny Easy Multi Display manampy anao hanatsara ny fahitana ny angon-drakitrao?
Fa maninona no mifidy rafitra famantarana nomerika ivelany?
Inona avy ireo fitaovana fampitaovana nomerika tokony hampiasaiko?
Tombony 7 amin'ny Digital Display
Ahoana ny fampiasana signage nomerika amin'ny fivarotanao?
| Copyright © Easy Multi Display 2021 Signage nomerika & rindrambaiko rindrambaiko horonantsary ho an'ny orinasa |
Ho any ambony